China PET Bottle Ihe ọiceụ Hotụ Hot ndochi Machine factory na suppliers | Higee
PITA karama ihe ọ Hotụ Hotụ Hot ndochi Machine
Anyị PET kalama ihe ọ fillingụ juiceụ na-ejuputa igwe akara integrates rinsing karama, na-ejuputa na capping igwe n'ime otu monoblock igwe. The usoro na-rụrụ n'ụzọ zuru ezu na-akpaghị aka. Na-ejuputa karama PET ma ọ bụ karama iko ma ọ bụ karama niile nwere ike ịhazi.
Mpi PITA karama ihe ọ Hotụ Hotụ Hot ndochi Machine 4 na 1 Monoblock Production Line
Anyị nwekwara ike ịkwadebe ihe ọ theụ theụ ihe ọ drinkụ drinkụ na akụrụngwa ọgwụgwọ mmiri, sistemụ igwekota ihe eji agwọ ọrịa, yana sistemụ ngwugwu gụnyere igwe eji eme ka aha gị, ịda mbà na igwe wdg.
1. Mbupu ikuku
2.Juice ndochi na mbukota System
RXGF usoro ihe ọ juiceụ juiceụ ihe ọ hotụ juiceụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ejikọ igwe na-asa mmiri, njuputa mmiri na ntinye n'ime otu monoblock, a na-arụkwa usoro atọ ahụ na akpaghị aka. A na-eji ya na mmiri na-ejuputa ihe ọ ofụ juiceụ na ihe ọ teaụ teaụ tii. Ọ na-onwem na zuru okè okpomọkụ akara usoro, agbara-eruba usoro, akpaka ihicha usoro na akara mmemme. Igwe ọ bụla nke kpọtụrụ ya na mmiri mmiri nwere igwe anaghị agba nchara na roba dị ka nri.
● All igwe anaghị agba nchara rinser isi, mmiri ịgba style igba imewe, ọzọ ịzọpụta mmiri oriri & ọzọ dị ọcha.
Igwe anaghị agba nchara Gripper na pad plastik, hụ obere karama mkpọka n'oge ịsa
● igwe anaghị agba nchara na-asa nfuli
Ision Nkọwa zuru oke na-ejuputa n 'onu ogugu, PLC na-agbanwe akara mgbaàmà, hụ na nkenke njuputa zuru oke
Filling Na-ejuputajujuju, & na-ejuputa nwayọ & na-aga n'ihu
● All igwe anaghị agba nchara kọntaktị akụkụ & mmiri mmiri tank, ezi Polish, mfe ọcha
● Enweghị karama enweghị nju
System Ebe & capping system, electromagnetic capping heads, with ibu orùrù ọrụ, jide n'aka na nke kacha nta karama n'oge capping
All 304 igwe anaghị agba nchara ewu
● Enweghị karama enweghị mkpuchi na Akpaaka nkwụsị mgbe enweghi karama
Ike / 500ml
3.Bottle Tụgharịa Sterilizer
Nke gara aga: Igwe ihe ọ drinkụ drinkụ na-a drinkụ ihe ọ drinkụ drinkụ
Osote: Glass karama Beer Na-ejuputa igwe